Sideen Ku sifaynaa Biyaha Roobka % Biyaha Socda Sidii Khayraad ahaan? | Saint Paul Historical
Xarumaha biyaha roobka ee Masuuliyiinta Saint Paul Beacon Bluff Xarunta ganacsiga waxay u sifeeyaan biyaha roobka sidii il loo isticmaalo inay cusboonaysiiyaan biyaha dhulka, waraabiyaan dhulka, siiba kor u qaadaan oo ilaaliyaan deegaanka dabiiciga ah. Hababka safaynta biyaha roobka iyo biyaha socda waxaa wakiil ka ah saddexda xaaladood ee hoos lagu sifeeyay; Ka dabataga Xaalada Hagaajinta waa xalka maaraynta deegaan ahaan ugu masuuliyada badan ee caqabadan deegaanka magaalooyinka ah.
Xaalada Dabiiciga ah
Horumarinta ka hor
Biyahu waxay ku soo gaadhaan oogadda dhulka iyagoo ku soo daata, (di’itaanka roobka, barafka, iwm.) Isku darka biyaha dhirto soo saarto iyo biyaha uumi baxa waxaa loogu yeedhaa uumi baxa biyaha iyo dhrita.
Deegaanka dabiiciga ah, ugu badnaan kala badh biyahan mid uun waxaa nuuga dhirta ama waxay ugu uumi baxaan dib atmoosfeerka sidii biyo uumi baxay. Ugu dhowaan 50% roobka soo daata waxa uu galaa camuuda, si uu u caawiyo cusboonaysiinta khayraadka biyaha dhulka hoostiisa ku jira.
Caadi ahaan 10% waxay ordaan oogada oo waxaa kala miira kaymaha, dhulka dooga leh iyo dhulka qoyaanka badan fadhiisamka leh ka hor inta aanay gelin harrooyinka iyo wabiyad.
Xaalada dib u Hagaajinta leh
La shaqaynaya Dabeecada
Maaraynta Jiilaka Cusub ee Labbaad ee Biyaha Roobka waxaa loo qeexaa sidii sifaynta biyaha roobka iyo biyaha socda ee jilaya kartiyaha dabiiciga ah si loo yareeyo biyaha roobka socda, loo yareeyo wasakhowga biyaha hoos qulqula, oo looga faa’iidaysto biyaha roobka sidii isha biyaha dhulka ee cusboonaanaya, waraabinta, iyo horumarinta wabiyada iyo harrooyinka.
Caafimaadka aadamaha iyo ganacsigu waxa uu ku xidhanyahay nidaamka deegaanka ee dabiiciga ah ee dhulka wixii ah hawo la nadiifiyay, falaxa dhirta, dhagaxa dhulka ee biyaha qabta, ka hortagga nabaad guurka, degaanshaha cimilada, iyo wax badan; waxaa jira xidhiidh la is dhaafsado oo u dhexeeya horumarka aadamaha iyo dabeecada. Keliya khayraadka dabiiciga waa in loola dhaqmaa si daryeelid iyo masuulinmo leh.
Bandhiga aaga biyaha daadka ee hortaada yaala waxa uu muujinayaa sida dabeecada iyo aadamahu ay u maareeyaan biyah roobka. Qadarka yar ee biyaha ah ee la isticmaalay bandhigan waxaa lagu ururinayaan taangiga kaydka biyaha dhulka hoostiisa. Biyahaas ka dib waxaa loo isticmaalaa si loo waraabiyo dooga iyo dhirta kale ee ku taala suuqa dad waynaha.
Ku hawlad Halaynta Dabeecada
Deegaanka magaalo ahaan aadka u horumaraym dhulka khudaarta ee aadka u jilicsan waxaa beddela mid adag (aan biyaho dhex mari karin) oogooyin ka kooban dhul la sibdhiyay, dhismayaan, saqafyada guryaha, iwm. Xaaladan, in badan sida 95% biyaha roobka lama sifeeyo oo waxay noqdaan suuragal ahaan kuwa socda oo wisikhoobay.
Biyaha qulqulaya oogada adag waxay ururshaan hadhaayo iyo wasakeeyayaal. Kaabado dhaqanka iyo nidaamyada maritaanka ee mijiroorada ayaa loo sameeyaa si degdeg ah si ay uga fogeeyaan biyaha roobka wadooyinka iyo marinada dadka, taas oo macnaheedu yahay waxa roobku qaato iyo wasakheeyayaasha waxaa si toos ah loogu qaadaa wabiyada iyo harrooyinka.
Intaa waxa dheer, daadka dhulka mara waa uu kordhaa marka biyaha roobka ee hore dabiici ahaan hore u yaaraaday ay degdeg u qulqulaan.
Saint Paul Port Authority, “Sideen Ku sifaynaa Biyaha Roobka % Biyaha Socda Sidii Khayraad ahaan?
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/347.